တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာန အကြီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အား ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် လာအို ပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အား ယနေ့ညပိုင်းတွင်နေပြည်တော်ရှိ ရွှေနန်းတော်ဟိုတယ်၌ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အတူ ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့်ဇနီး၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးနှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့်ဇနီး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှတပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့်ဇနီးများ တက်ရောက်ကြပြီး လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီး ဌာနအကြီးအကဲနှင့်အတူဇနီး Lt.Col.Mrs.Phayvanh LEUANGBOUNMY ၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG နှင့်လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာန အကြီးအကဲနှင့် ဇနီးတို့အားကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုပြည်သူ့ တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲတို့သည် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများအသီးသီးပြောကြား၍ တက်ရောက် လာကြသူများနှင့်အတူ ဂုဏ်ပြုညစာကိုအတူတကွသုံးဆောင်ကြသည်။
ညစာသုံးဆောင်နေစဉ်အတွင်း ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကွပ်ကဲမှုအောက် မြ၀တီတေးဂီတအဖွဲ့က တေးသီချင်းများ၊ အကပဒေသာ များဖြင့် သီဆိုကပြဖျော်ဖြေကြပြီး ညစာသုံး ဆောင်အပြီးတွင် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများအပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြသည်။
ထို့နောက်သီဆိုကပြဖျော်ဖြေကြသော ဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့မှ စစ်သည်၊ စစ်သမီးများအားဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းများ အသီးသီးပေးအပ် ကြပြီး အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ လာအို ပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီးဌာနအကွီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အား ယနညေ့ပိုငျးတှငျနပွေညျတျောရှိ ရှနေနျးတျောဟိုတယျ၌ ဂုဏျပွုညစာဖွငျ့ တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုညစာစားပှဲအခမျးအနားသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အတူ ဇနီးဒျေါကွူကွူလှ၊ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျးနှငျ့ဇနီး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦးနှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး နှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောနှငျ့ဇနီး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံးမှတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားနှငျ့ဇနီးမြား တကျရောကျကွပွီး လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီး ဌာနအကွီးအကဲနှငျ့အတူဇနီး Lt.Col.Mrs.Phayvanh LEUANGBOUNMY ၊မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG နှငျ့လာအိုပွညျသူ့တပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွသညျ။
ဦးစှာတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ဇနီးတို့က လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီးဌာန အကွီးအကဲနှငျ့ ဇနီးတို့အားကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။ ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီးဌာနအကွီးအကဲတို့သညျ နှုတျခှနျးဆကျစကားမြားအသီးသီးပွောကွား၍ တကျရောကျ လာကွသူမြားနှငျ့အတူ ဂုဏျပွုညစာကိုအတူတကှသုံးဆောငျကွသညျ။
ညစာသုံးဆောငျနစေဉျအတှငျး ပွညျသူ့ဆကျဆံရေးနှငျ့စိတျဓာတျစဈဆငျရေး ညှနျကွားရေးမှူးရုံး ကှပျကဲမှုအောကျ မွဝတီတေးဂီတအဖှဲ့က တေးသီခငျြးမြား၊ အကပဒသောမြားဖွငျ့ သီဆိုကပွဖြျောဖွကွေပွီး ညစာသုံးဆောငျအပွီးတှငျ အမှတျတရလကျဆောငျ ပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျပေးအပျကွသညျ။
ထို့နောကျသီဆိုကပွဖြျောဖွကွေသော ဖြျောဖွရေေးအဖှဲ့မှ စဈသညျ၊ စဈသမီးမြားအားဂုဏျပွုပနျးခွငျးမြား အသီးသီးပေးအပျကွပွီး အမှတျတရစုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။